Moments leh saaxiibo - Word Foundation
“Daqiiqadaha Saaxiibbada la yahay” waa muuqaal Q & A ka mid ah Word The wargeyska. Intii udhaxeysay 1906 iyo 1916, su'aalaha hoos ku taxan ayaa soo bandhigay akhristayaasha Word The waxaana ku jawaabay Mr. Percival hoosta rafcaanka "Saaxiib." Waqtigu markuu dhammaaday, waxaan go'aansannay inaan magaciisa u dhigno qoraaga jawaabaha.
Sannadkii 1986-kii, Mu'asasada Word waxay abuurtay nooc saddex biloodle ah Word The majaladda weli daabacaadda. Waxa kale oo ay ka kooban tahay qaybta "Moments with Friends" oo ka kooban su'aalo ay ka yimaaddaan akhristayaasha iyo jawaabaha ardayda muddada dheer.
Guji taariikhaha bilaha ee hoose si aad uhesho jawaabaha dhamaan su'aalaha kuqoran taariikhdaas.
Guji su'aal si aad u aaddo jawaabta su'aashan.
Guji PDF loogu talagalay soo celinta qaabkii asalka ahaa.
• Sidee baan u sheegi karnaa waxa aan ku jirnay jiritaankeena ugu dambeeyay?
• Ma sheegi karnaa inta jeer ee aynu ku dhalannay ka hor?
• Miyeynu miyirbannahay inta udhaxeysa reincarnations?
• Muxuu yahay aragtida qadiimka ah ee reersarnation ee Adam iyo Eve?
• Waa maxay dhererka wakhtiga loo xilsaaray reincarnations, haddii uu jiro wakhti cayiman?
• Miyaanu bedelin shakhsiyadeena markaan ku laabanno dhulka?
• Miyuu Towofoolistu aaminsan yahay wax ka baxsan?
• Maxaa saldhig u ah fikradda ah in uu ku dhashay "caul" inuu lahaan karo macalimiin cilmi nafsiyeed ama awood maskaxeed?
• Haddii fikradda loo gudbin karo maskaxda kale, maxay tani u dhacaysaa si sax ah iyo sirta intee le'eg sida wadahadalka caadi ah?
• Miyeynu wax la mid aheyn habka isdhaafsiga loo maleynayo?
• Sidee baan ugu hadli karnaa si macquul ah fikirkeena?
• Ma haboon tahay inaad akhrido fikradaha dadka kale haddii ay rabaan iyo in kale?
• Waa maxay sababta ay u fiicantahay in jidhka la qabadsiiyo geerid kaddib halkii lagu aasay?
• Ma jiraan wax run ah oo sheekooyin ah oo aan akhrino ama maqalno, ku saabsan vampires iyo vampirism?
• Maxay tahay sababta dhimashada degdegga ah ee dadka haddii ay da 'yar yihiin ama noloshu tahay nolol caadi ah, marka ay u muuqato sanooyin badan oo faa'iido iyo korniimo, maskax iyo jir ahaan, ka hor iyaga?
• Haddii ciribta lugta, lugta, ama xubin kale oo jidhka ah aan la jarin marka xubnaha xubinta jidhka la gooyo, maxay tahay sababta jidhka cirrigu ma awoodo in uu soo saaro gacan ama lug kale oo jidhka ah?
• Miyuu yahay makhraafiyiinta dufan iyo cunto yaryar?
• Sidee ayuu ufududaha dhabta ah u tixgelin karaa naftiisa, oo wuxuu weli cunaa hilibka markaan ogaanno in rabitaanka xayawaanka laga soocayo hilibka xayawaanka si uu jidhka cuna u cuno?
• Ma runbaa in khatarta Hindiya, iyo ragga rabbaaniga ah, ay ku nool yihiin khudradda, hadday sidaas tahay, ma aha in kuwa naftooda koraan ay ka fogaadaan hilibka iyo sidoo kale ku noolaadaan khudaarta?
• Maxaa saameynaya cunidda khudradda ku jirta jidhka dadka, marka la barbardhigo cunista hilibka?
• Sidee loo cuni karaa nacnacmarka maskaxda ee maskaxda marka khudradda diineed lagu taliyay si loo gaaro feejignaan?
• Maxay tahay macnaha saxda ah ee ereyga, oo loo isticmaalo isku xirnaansho aad u badan oo ay ka mid yihiin muusikada iyo maqaayadaha?
• Maxaa loola jeedaa "asaasiga aadanaha"? Ma jiraan wax farqi ah oo u dhaxeeya isaga iyo maskaxda hoose?
• Miyuu jiraa xakamaynta asalka ah ee rabitaanada, kale oo xakameynaya xoogga muhiimka ah, kantaroolida shaqooyinka jidhka, ama maareynta asalka aadanaha oo dhan?
• Miyuu xakamaynayaa xajinta asaasiga ah ee ficillada miyir-qabka iyo shaqooyinka miyir la'aanta jirka?
• Miyuu yahay mid ka mid ah qaybaha guud ee isbeddelka, oo dhammaantood ama midkoodna miyuu ku jiraa habka horumarintu noqdaan rag?
• Dhab ahaantii suurtagal maaha mid inuu arko mustaqbalka?
• Miyuu suurtagal ahayn in mid ka mid ah uu arko dhacdooyinka dhabta ah ee dhacdooyinkii hore iyo dhacdooyinka maaddaama ay mustaqbalka noqon doonaan si cad oo muuqaal ah sida uu u arko xaadirka?
• Sidee ay suurtogal u tahay in mid ka mid ah la arko clairvoyantly marka aragtida noocaas ahi ka soo horjeedo dhammaan khibradaheena?
• Muxuu yahay xubnaha loo isticmaalo cagaarvoyance, iyo sidee baa aragtida qofka looga wareejiyay shayada u dhow ee gacanta u ah kuwa masaafo weyn, iyo laga ogaado muuqaalka aan la garanayn?
• Maqaalkani miyuu arki karaa mustaqbalka markasta oo uu rabo, oo miyuu isticmaali karaa macallin clairvantan inuu sameeyo?
• Haddii maskaxdu ay xakameyso daboolka sababtoo ah muxuu diidan yahay, qof ahaan ama si wadajir ah uga faa'iideysanaya aqoontooda dhacdooyinka soo socda?
• Muxuu yahay "indhaha saddexaad" oo miyuu cagaarshoolaha iyo maqalka u isticmaalaa?
• Yaa u adeegsanaya qanjaha garoomada, iyo waa maxay sheyga isticmaalka?
• Sidee indhaha saddexaad ama qanjirka indhaha furan, iyo maxaa ka dhacaya furitaankaas?
• Miyuu Christmas leeyahay wax macne gaar ah u ah aosophist, iyo haddii ay sidaas tahay, maxaa?
• Miyuu suurtagal noqon karaa in Ciise yahay qof dhab ah, iyo in uu ku dhashay on Christmas Day?
• Haddii Ciise ahaa nin dhab ah sababta maxay tahay inaanan haysan wax taariikh ah taariikhda dhalashada ama noloshii nin sida nooca bible ah?
• Maxay ugu yeeraan tan, 25th ee Diisambar, Kirismaska ​​halkii Ciisemass ama Ciise Maalin, ama Magacyo kale?
• Ma jiraa qaab habboon oo lagu fahmo dhalashada iyo nolosha Ciise?
• Waxaad Masiixa ka hadashay mabda'a. Ma waxaad kala saari kartaa Ciise iyo Masiixa?
• Sababta nooca gaarka ah ee loo xushay ayaa ah inay u dabaaldegto maalinta 25th ee bisha Diseembar iyadoo ah tan dhalashada Ciise?
• Haddii ay suurtogal tahay in bini aadamku noqdo Masiixa, sidee loo qabtaa iyo sidee ku xiran tahay maalinta 25th ee Diisambar?
• Miyay qalad tahay in la isticmaalo maskaxda halkii ay ka noqon lahayd habab jireed si loo daaweeyo qaladaadka jirka?
• Miyuu xaq u leeyahay in la isku dayo in lagu daaweeyo qaladaadka jirka ee daaweynta maskaxda?
• Haddii ay xaq u leedahay in lagu daaweeyo qalqalaha jireed ee maskax ahaan, macneheedu waa maskaxda jireed waxay leedahay asal maskaxeed, maxay khalad ugu tahay aqoonyahan maskaxiyan ama masiixiyiin ah si uu u daaweeyo bukaanshada daaweynta maskaxda?
• Maxay khalad u tahay saynisyahannada maskaxda in ay helaan lacag loogu talagalay daaweynta jirdilka ama maskaxda dhimirka inta ay dhakhaatiirtu ka qaadaan kharashka joogtada ah?
• Sababtoo ah maaha mid xaq u leh cilmi-nafsiga maskaxda si uu u helo lacag loogu talagalay daaweynta cudurka marka uu waqtigiisu dhammaanayo shaqadan, waana inuu haystaa lacag uu ku noolaado?
• Sidee bay dabiicigu u siin kartaa qof runtii raba inuu faa'iido kale u yeesho, laakiin qofkee u lahaan waaya inuu taageerayo naftiisa?
• Miyay khabiirada masiixiyiinta iyo maskaxdu aanay samayn wax fiican haddii ay saameyn ku yeeshaan daaweynta ay dhakhaatiirtu ku dhacaan?
• Maxay tahay shuruudaha noocee ah ee maskaxeed ee maskaxiyan maskaxiyan haysto?
• Muxuu yahay awoodda uu qofku u raaco shaqadiisa ama hawlgallada maskaxda, iyo inuu si dhab ah u arko sababaha, ka-reebista sheegashada maskaxiyan iyo masiixiyiin?
• Maxay yihiin natiijooyinka aqbalaadda iyo dhaqanka barista ee cilmiga masiixiyiinta ama maskaxda?
• Waa maxay sababta ay dad badani u bogaan oo barwaaqoobaan haddii aysan saameyn karin daaweynta, iyo haddii aanay ahayn waxa ay u matalaan inay noqdaan, bukaankooda ma ogaan karaan xaqiiqda?
• Miyuusan ahayn Ciise iyo qaar badan oo ka mid ah quduusiinta, miyuu jiraa miyir-beelka jidhka oo macnihiisu yahay maskaxeed iyo haddii ay sidaas tahay waxay khalad ahayd?
• Haddii ay khalad tahay helitaanka lacag loogu talagalay in lagu daaweeyo hababka maskaxda ee hababka maskaxda, ama bixinta "sayniska sayniska," miyuu sidoo kale qalad u yahay macalinka iskuulka si uu u helo lacag loogu talagalay ardayda ku jirta mid ka mid ah laamaha waxbarashada?
• (Warqad tafaftire ah, March 1907 "Moments with Friends" ayaa la yaab leh, ka dibna waxaa ka jawaabay jawaab ka timid Percival.-Ed.)
• Christian ayaa sheegay in Man uu leeyahay Body, Ruuxa iyo Ruuxa. The Theophophist ayaa sheegay in Man uu leeyahay 7-da Mabaadi. Ereyada yar ayaa ah maxay yihiin Todoba Mabaadi?
• Ereyada yar ayaa iigu sheegi kara wixii geeriyoodey?
• Inta badan caqiido bixiyeyaashu waxay ku andacoodaan in markay seegaan nafta kuwa ka baxsan ay muuqdaan oo ay la sheekeystaan ​​saaxiibo. Tafatirayaashu waxay yiraahdaan tani ma aha kiiska; in wixii la arko ayan ahayn nafta laakiin uu yahay qolof, duufaan ama jidh jecel kaas oo nafta ka jareen. Yaa sax ah?
• Haddii nafta ninku xabsi ku hayo ka dib geeridiisa jidhkiisa, maxayse nafta ugu muuqan kartaa in ay u egtahay in ay tahay meel aan la seexin, maxaayadaba u qaldan tahay in la yiraahdo ma ahan muuqan oo loola jeedo kuwa fadhiya?
• Haddii muuqashooyinka kuxiga ay yihiin kaliya muraayadaha, buufinta ama doonista jidhka, kuwaas oo ay kala gooyeen nafaha dhimashada ka dib, maxay sababta ay u awoodaan inay ula xiriiraan kuwa fadhiya maadada ay yaqaanaan oo keliya qofka daneynaya, iyo sababta Miyay tahay mawduuca isla markiiba soo kordhi doona?
• Xaqiiqda looma diidi karo in jinniyadu mararka qaarkood u sheegaan runta sidoo kale waxay bixiyaan talo haddii la raaco waxay keenaysaa faa'iidada dhammaan dadka khuseysa. Sidee u noqon kartaa sarkaalka, ama kuwa kale ee ka soo horjeeda diimeed, ma diidaan ama sharaxaan xaqiiqooyinkaas?
• Haddii ay run tahay in aysan jirin muraayado yar yar, muraayado iyo walxo aan ka jirin maanku, waxay u muuqdaan sida waxbarashooyinka muusikada, marka laga hadlayo, halkaa ka yimaadaan macluumaadka iyo waxbarista falsafada iyo inta badan dabeecadda, oo qaar ka mid ah dhexdhexaadiyeyaashu ay shaki ku galaan?
• Miyay shaqeeyaa dhintay si gooni ah ama si wadajir ah si ay u gaaraan dhammaadka qaar?
• Sidee buu kan dhintay u cunaa, haddiiba? Waa maxay noloshooda?
• Miyuu dhintay dhiman dharka?
• Miyuu dhintay miyuu ku nool yahay guryo?
• Miyuu hurdo u dhintaa?
• Kuwa dhintay miyuu ku nool yihiin qoysaska, beelaha, iyo haddii ay sidaas tahay dawlad?
• Ma jiraa ciqaab ama abaalmarin ku saabsan falalka ay sameeyeen kuwii dhintay, inta ay nool yihiin ama dhimashada ka dib?
• Miyay kuwii dhintay aqoon u leeyihiin?
• Miyuu miyuu garanayaa waxa dunidan ku socota?
• Sidee u sharaxdaa kiisaska ay meydka u muuqdaan riyooyin, ama dadka soo jeeday, oo ku dhawaaqay in dhimashada dadka qaarkood, guud ahaan xubnaha kale ee qoyska, ay u dhowdahay?
• Miyuu dadka dhintay u soo jiidatay xubno ka mid ah qoyskiisa halka ay joogaan dhulka, oo ay ilaaliyaan iyaga; miyaanay hooyada ka tagtay carruurteeda yar?
• Dunida dadka dhintay waxaa jira qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha sida adduunkeena?
• Miyay suurtagal tahay in kuwii dhintay ay saameyn ku yeeshaan noolaanshaha iyada oo aan aqoonta nolosha, iyagoo soo jeedinaya fikrado ama camal?
• Qofna ma yaqaanno meesha uu ku yaal agagaarka oo qorraxdeena iyo meerayaasha ay u muuqdaan inay noqdaan kuwo dib u noqda? Waxaan aqriyay in ay tahay Alcyone ama Sirius.
• Waa maxay wadnaha garaaca wadnaha; Miyuu yahay hirarka mawjadaha qorraxda, sidoo kale waxa ku saabsan neefsiga?
• Waa maxay xiriirka u dhexeeya wadnaha iyo shaqada jinsiga-sidoo kale neefsiga?
• Meeqo ayay tahay in dayaxu ay u sameeyaan nin iyo nolol kale oo dhulka ah?
• Qorraxda ama dayaxu miyuu maamulaa ama ma xukumi karaa xilliga fasalka? Haddii kale, maxay tahay?
• Ma ii sheegi kartaa dabeecada dabka ama dabka? Marwalba waxay u muuqatay wax la yaab leh. Ma heli karo macluumaad ku filan oo ku saabsan buugaagta sayniska.
• Maxay tahay sababta keentay dabka weyn, sida gubashada dabka iyo dabka ee u muuqda in ay si isku mid ah u guureen qaybo kala duwan oo magaalada ka mid ah, iyo maxaa dhiigbax aan caadi ahayn ah?
• Sidee baa birahaas loo yaqaan 'dahab, copper' iyo 'silver'?
• Miyaad rumaysan tahay cilmi ahaanshaha sida sayniska? Hadday saas tahay, intee le'eg ayey tahay in loo tixgeliyo sidii loola xiriiri lahaa nolosha dadka iyo danaha?
• Maxay tahay sababta dhalashada adduunka ee jireed saamayn ku yeelatay maslaxadda maskaxda?
• Sidee ayey dhalashadeeda u ogaaneysaa mid ka mid ah aayihiisa dunida?
• Sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa dhalashada, ama mid ka mid ah aayihiisa, waxay la shaqeeyaan karma ee ego?
• Miyuu saameyn ku yeeshay qorshaynta si uu u maamulo karaka dadka, ama qaddar? Haddii ay sidaas tahay, xagee xor u tahay inuu yimaado?
• Muxuu mararka qaarkood sheegay in Ciise uu ahaa mid ka mid ah badbaadiyeyaasha aadanaha iyo in dadkoodii hore ay haysteen badbaadiyeyaal, halkii ay ku dhihi lahaayeen wuxuu ahaa Badbaadiyaha adduunka, sida uu hayo dhammaan Masiixiyadda?
• Ma noo sheegi kartaa haddii ay jiraan dad u dabaaldega dhalashadooda badbaadadooda markay tahay ama ku dhawaad ​​shan iyo labaatankii shanaad ee Diseembar (wakhtiga qorraxda la sheegay inuu galo calaamadda Cunniga?
• Waxaa la sheegay qaar ka mid ah in dhalashada Masiixa ay tahay dhalasho ruuxi ah. Haddii tani ay sidaas tahay, maxay tahay sababta in loo dabaaldagayo jimicsiga jidhka jidhka marka la cuno iyo cabitaanka, hab wax ku ool ah, taas oo ka soo horjeeda fikradaha diiniga ah?
• "Moments with Friends" ee Vol. 4, bogga 189, waxaa la yiraahdaa Christmas-ka micnaheedu waa "dhalashada qorraxda aan muuqan ee mabda'a ah, Masiixa" Principality ", taas oo sii socota," waa in uu ku dhashay gudaha gudihiisa. "Hadday sidaas tahay, miyuu raacayaa jireed dhalashada Ciise sidoo kale ahaa on shan iyo labaatanaad ee December?
• Haddii Ciise ama Masiixu uusan ku noolaanin oo wax barin sida uu u malaynayo inuu sameeyay, sidee haddaba qaladka noocaan oo kale ah looga adkaan karaa qarniyo badan oo ay tahay inuu ku guuleysto maanta?
• Ma waxaad leedahay macnaheedu in taariikhda Masiixiyaddu ay tahay wax aan sax ahayn, in nolosha Masiixa ay tahay khuraafaad, iyo in muddo ku dhow 2,000 dunidu ay aaminsan yihiin khuraafaad?
• Haddii caqliyada cilmiga leh ay awood u leeyihiin inay arkaan arimahan, maxaa sabab u ah in aysan jirin ilaalo dhexdhexaadin ah oo dhexdhexaad ah oo awoodi kara in uu la kulmo baaritaanka tirakoobka caanaha ee caanka ah?
• Muxuu sharaxaad ka bixin karaa Theosophy oo ku saabsan dhulgariirrada ba'an ee si joogta ah u dhacaya, oo laga yaabo inay burburiyaan kumanaan qof?
• Waa maxay dhalashada Ilaah ama jiritaanka jaangooyo
• Muxuu yahay isticmaalka ama shaqeynta jidhka pituitary?
• Waa maxay isticmaalka ama shaqeynta qanjirada cirifoonida?
• Waa maxay isticmaalka ama waxqabadka beeryarada?
• Waa maxay isticmaalka ama shaqada qanjirka thyroid?
• Xayawaanka miyuu leeyahay oo miyuu qabaa?
• Saameyn xun ma la keeni karaa bani-aadamka iyada oo joogitaanka xoolaha xayawaanka ah?
• Miyuu jiraa sabab looga dhigo kuwa sheeganaya in dadka naftooda ka baxsan ay ku dhacaan shimbiraha ama xayawaanka?
• Miyaad si buuxda u sharxi kartaa sida fikradaha kala duwan ee dadku u dhaqmaan ee ku saabsan arrimaha adduunka si ay u soo saaraan noocyo kala duwan oo xayawaan ah sida libaaxa, orsada, shinbiraha, rattlesnake? Fikradda.-Ed.)
• Qofku miyuu jiri karaa gudaha jidhkiisa oo wuxuu arkayaa shaqooyinka hay'adaha kala duwan, hadday sidaas tahay sidan ayaa loo sameyn karaa?
• Maxay yihiin qodobbada muhiimka ah ee dunida dunidu ka duwan tahay ruuxa? Ereyadaas waxaa badanaa loo isticmaalaa buugaagta iyo majaladaha wax ka qabta mawduucyadan, adeegsigaani wuxuu u yahay inuu isku kalsoonaado maskaxda akhristaha.
• Miyuu jiraa xubin kasta oo jidhka ah oo ah hay'ad caqli-gal ah ama ma shaqeeyaa si toos ah?
• Haddii xubin kasta ama qeyb ka mid ah jireed oo maskaxda ku matala, markaa maxaa sabab u ah qof aan bini'aad ahayn oo aan lumin isticmaalka jirkiisa marka uu lumiyo isticmaalka maskaxdiisa?
• Uma muuqato macquul in labo ama in ka badan oo fikrado is diidan ahi ay sax u noqon karaan wixii run ah. Maxay tahay fikrado badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ama waxyaabaha qaarkood? Sidee haddaba aan u sheegi karnaa ra'yi xaqiiqa ah iyo waxa runta ah?
• Maxay yihiin dhagaxyo qaali ah oo loo qoondeeyay bilaha qaarkood sanadka? Tani ma waxay keentay wax kale oo aan ahayn dadka oo dhan?
• Miyuu dheeman yahay ama dhagax qaali ah oo qaali ah oo aan ahayn kan kaas oo metelaya lacagta caadiga ah? iyo, haddii ay sidaas tahay, muxuu yahay qiimaha dahab ama dhagax noocaan oo kale ah?
• Miyuu ruuxu ku dhaqmaa nin iyo waxa ruuxu yahay?
• Miyuu aaminsan yahay in reer Atlanta ay duuli karaan? Hadday sidaas tahay, xaggee bay aaminsan yihiin?
• Miyay shakhsiyaadka isku dayaya inay xalliyaan dhibaatada gawaarida gawaarida, Atlanteans reincarnated?
• Haddii Atlanta ay xallinayaan dhibaatada hareeraha hawada, iyo haddii kuwa hadda ka walaacsan dhibaatada la mid ah ay ahaayeen Atlanta, ka dibna sababta ay shakhsiyaadkaasi u noqdaan kuwo aan dib loo bilaabin tan iyo markii ay Atlantis ka hor iyo hadda ka hor, iyo haddii ay mar kale horey u soo dhigeen da'dooda hadda jirta, sababta ay u awoodi waayeen inay hawada sare u qaadaan ama u duulaan intaan wakhtiga la joogo?
• Ma nahay ama ma waxaan ku jirnaa ururada atma-buddhi?
• Ma runbaa in wax kasta oo aan noqon karno waa horey inoogu jirta, iyo in wax kasta oo aan samayno ay tahay inaan ka dhigno mid miyir leh?
• Miyay madoobaan maqnaanshaha iftiinka, ama ma aha wax gooni u goosta oo isha ku haysa? Haddii ay yihiin kuwo kala duwan oo kala duwan, waa maxay mugdiga iyo waa maxay iftiinka?
• Waa maxay radium iyo sidee suurtogal u ah in ay si joogto ah u soo saarto tamar weyn iyada oo aan wax qashin ah iyo khasaaro awoodeeda iyo jidhkiisa, iyo maxay ilaha wacyigalinta weyn ee radiyaha?
• Miyuu suurtagal yahay in uu horumariyo noocyada cusub ee khudradda, miro ama dhirta, gebi ahaanba kala duwan oo ka duwan noocyada kale ee la yaqaan? Haddii ay sidaas tahay, sidee loo sameeyaa?
• Miyuu suurtagal yahay oo waa sax in la eego mustaqbalka iyo saadaalinta dhacdooyinka mustaqbalka?
• Miyuu suurtogal ah in fikradda laga saaro maskaxda? Hadday sidaas tahay, sidee baa loo sameeyaa? Sidee baa mid hore u noqon kartaa dib u soo noqoshadiisa oo ka ilaalisa maskaxda?
• Miyuu ka tirsan yahay jaaliyadaha qarsoodiga ah inuu saameyn ku yeesho ciribtirka ama maskaxda ku haya horumarkiisa? Miyaa suurtagal ah in wax laga helo waxba?
• Maxay dadku isku dayaan inay wax uun u helaan? Sidee ayay dadku u muuqdaan inay wax waxtar u leeyihiin, inay bixiyaan wixii ay helayaan?
• Maxay yihiin faraqooyinka muhiimka u ah ee u dhexeeya Theosophy iyo fikir cusub?
• Waa maxay sababta kansarka? Ma jiraa wax daawo ah oo loo yaqaano ama ma jiri doono habab daaweyn ah ka hor inta aan la daaweynin daaweynta?
• Waa maxay sababta ay abeesadu u kala duwan tahay dadka kala duwan? Mararka qaarkood nabigu wuxuu u hadlaa sida wakiilka shar ah, waqtiyada kale sida calaamadda xigmadda. Maxay tahay sababta ninku u cabsanayo cabsida dabiiciga ah ee maskaxda?
• Ma jiraan wax run ah oo sheekooyinka sheegaya in Rosicruciansku weligood gubteen nalalka? Hadday sidaas tahay, sidee loo sameeyey, maxay ujeedadoodu u adeegeen, oo miyaa la samayn karaa oo hadda la isticmaali karaa?
• Waa maxay sababta gorgoriyuhu loo isticmaalo calaamad u ah quruumo kala duwan?
• Miyuu gorgortan labanlaabmood ee loo isticmaalo sida calaamadda qaranka ee waddamada qaar, oo laga helayo taallada Hititii ee wakhtiyadii Kitaabka Qudduuska ah, oo loo malaynayo xaalad xag jir ah?
• Afarta meelood iyo afar meelood wareega wareegga Masonic Keystone ee Royal Arch Cutubka waa waraaqaha HTWSSTKS Ma waxay leeyihiin xidhiidh kasta oo Zodiac ah, maxayse tahay jagooyinkooda ku wareegsan goobada?
• Waa maxay Dhadhanka Cuntada?
• Miyuu dhadhamiyaa cuntada qiimo kasta sida nafaqada marka laga reebo cuntada?
• Sidee qofku isaga difaaci karaa been-abuurka ama been-abuurka dadka kale?
• Sidee xayawaannada xayawaanku u noolaadaan iyagoo aan cunto lahayn oo aan muuqan hawo la'aan inta lagu jiro muddada dheer ee suunka?
• Xayawaanku sanbabada ma noolaan karaa isagoo aan neefsanayn? Hadday sidaas tahay, sidee bay u nool yihiin?
• Sayidku ma aqoonsan karo sharci kasta oo uu ku noolaan karo iyada oo aan cunto iyo hawo lahayn; hadday sidaas tahay, haddaad dadka u noolaataan, oo sharcigu waa maxay?
• Waa maxay sababta wakhtigu u kala qaybsan yahay?
• Waqtigaa ku jira qaybahiisa sanadaha, bilaha, toddobaadka, maalmaha, saacadaha, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada wixii waraaqo jireed ama hababka kale ee jidhka bini'aadamka ah? Hadday sidaas tahay, maxay yihiin waraaqaha?
• Miyuu qofku ku noolaan karaa, dhammeeyaa hawlihiisa, oo u dhiman karaa in ka badan hal nolos inta uu ku egtahay sanadkaan dhulka?
• Maaddada dugsiga hoose / dhexe, maaddooyinka maskaxeed, waa in la keenaa qaab la taaban karo by gacmaha; haddii ay sidaas tahay, nooca gaarka ah ee la soo saari karo iyo sida loo sameeyo?
• Sidee gacmaha loo isticmaali karaa bogsashada jirka mid ka mid ah jirka ama qeyb jirka ka mid ah?
• Maxaa lagama maarmaan u ah korniinka kalsoonida?
• Waa maxay nooca fooxa, iyo intee in le'eg ayaa la isticmaalay?
• Miyaa wax faa'iido ah oo laga soo qaatay gubashada fooxa, inta lagu jiro fekerka?
• Dhibaatooyinka gubashada gubanaya midkoodna miyuu ka mid yahay diyaaradaha?
• Midabada, dhuxusha iyo dhagaxyada waxa loo saaraa toddobada meeraha?
• Haddii uu xirmayo midabada, dhuxusha iyo dhagaxyada ayaa lagu go'aamiyaa qaabka meerahaas oo uu ku xiran yahay qofka xiran?
• Ma leedahay midabada, birta iyo dhagax kasta oo ah waxyaabo gaar ah, iyo sidee loo huwan karaa iyada oo aan loo eegin meerayaasha?
• Waa maxay waraaqaha ama lambarrada ku lifaaqan ama la asturay meerayaasha?
• Miyuu yahay microcosm of macrocosm, universe ee mugdiga ah? Hadday sidaas tahay, meerayaasha iyo xiddigaha muuqda waa inay ku jiraan isaga dhexdiisa. Halka ay ku yaalaan?
• Maxaa loola jeedaa caafimaadka guud ahaan? Haddii ay tahay dheellitirka awoodda jirka ee maskaxda, maskaxda iyo ruuxaba, markaa miisaanku waa sidee?
• Ma u fiican tahay inuu nin ka tago jirkiisa jir ahaaneed oo aan ogsoonayn, in nafta uu geli karo dawladiisa?
• Dhererkee ayuu qofku ku gaadhi karaa qofka jirkiisa jirkiisa ka tagay, miyuu jiraa miyir qabka ka dib?
• Fadlan bixi qeexidda dhimashada iyo in yar si joogta ah sida dhimashada loo gaari karo?
• Miyuu jecel yahay qofkuna jecel yahay inuu muujiyo naftiisa? Hadday sidaas tahay, sidee bay u muuqdaan? Haddii kale, halkee bay ka imanayaan kuwaan jeclaan iyo nacayb?
• Ma waxaa haboon in nin ninku ku adkaado rabitaankiisa jinsiga, oo uu ku dadaalayaa inuu ku noolaado nolol kali ah?
• Muxuu yahay fikradda cibaadada ee kafaaraggudka, iyo sidee loola heshiin karaa sharciga karma?
• Waa maxay qosol, maxayna dadku qoslaan?
• Waa maxay xiriirka u dhexeeya magnetismka iyo culeyska, iyo sidee ayay u kala duwan yihiin, haddiiba? Maxay tahay xiriirka u dhexeeya magnetism iyo xayawaanka xoolaha, iyo sidee ayay u kala duwan yihiin, hadday ahaan lahayd?
• Sidee baa loo daweeyaa by magnetism xayawaanka?
• Miyuu jiraa xayawaanka xoolaha, mesmerism, iyo hypnotism la xidhiidha, iyo haddii ay sidaas tahay, sidee bay u la xiriiraan?
• Sidee ayuu ujirrada xayawaanku u dhaqaajin karaa, iyo sidee loo isticmaali karaa?
• Waa maxay dareenka urta; sidee bay u dhaqmaan? samee qayb ka mid ah jirka oo ku lug leh soo saarista dareemaha, iyo qaybkee ayaa urta cayaarta ku noolaanshaha?
• Waa maxay fikradda? Sidee loo soo saari karaa oo loo isticmaali karaa?
• Waa maxay cudurka iyo nooca xiriirku leeyahay bakteeriyadu?
• Waa maxay kansarka waana la daaweyn karaa, haddii la daaweyn karo, waa maxay daaweynta?
• Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu xiro xaaladaha wacyiga iyo riyoodka si aan u jirin isbeddel xilliga uu qofka hurdiga ahi miyir qabo?
• Maxaad nagu boorineysaa in aan u hoggansanno fikradaheena? Ilaa heerkee ayaan u ogolaaneynaa inaan ka soo horjeedno ra'yigeena kuwa kale?
• Sidee ayay dhibaatooyinkaas oo dhan wax uga qabteen dadaalladooda oo ay u muuqdaan kuwo aan suurtagal ahayn xallinta inta lagu jiro wakeeyn saacadaha waa in lagu xalliyaa inta lagu jiro hurdada ama isla markiiba soo kicinta?
• Waa maxay xasuusta?
• Maxaa keena xasuusta luminta?
• Maxaa keena mid ka mid ah inuu iloobo magaciisa ama meesha uu ku nool yahay, inkasta oo uu xusuustiisu aysan ku dhicin dhinacyo kale?
• Maxaa badanaa loola jeedaa ereyga "Soul" iyo sidee loo isticmaalaa erayga Soul?
• Maaha mabda'a fiqi ahaaneed ee caqabaddeenna ku saabsan dhulka oo ah karmicmaalmeed, oo leh shuruuda fiqi ahaaneed ee dhibaatadeena ah sida jahannamada cadaabta, in labadaba sheego in la aqbalo diinta rumaysadka oo kaliya; iyo, mid kale, mid wuxuu ku saabsan yahay mid wanaagsan sida kan kale si ay u soo saaraan wanaag wanaagga ah?